Akwụkwọ Kindle ọhụrụ na ụmụaka Kindle, nzọ Amazon maka ọdịda a | Ndị na -agụ akwụkwọ niile
Ọhụrụ Kindle Paperwhite na Kindle Kids, nzọ Amazon maka ọdịda a
Joaquin Garcia | 22/09/2021 16:30 | Amazon unu si n'ihe unu, ndị na-agụ akwụkwọ
Amazon kpughere ngwaọrụ ọgụgụ ọhụrụ ya ụnyaahụ mana n'ụzọ ọchịchị karia taa Ugbu a anyị nwere ike ịhụ njirimara na faịlụ nke faịlụ New Kindle Paperwhite na Kindle Paperwhite Mbinye aka mbipụta.
Mana na mgbakwunye Amazon dọtara ihe ịtụnanya ọhụrụ anyị enweghị na asịrị gọọmentị, otu n'ime ha bụ ngalaba ụmụaka Kindle nke mejupụtara ọtụtụ ngwaọrụ Amazon nke ezubere maka mpaghara ọgụgụ ụmụaka kacha ọhụrụ.
Na nke a anyị nwere Ụdị Kindle nwere atụmatụ na mmegharị maka ụmụaka akpọrọ Kindle Kids anyị nwekwara Ụmụaka Kindle Paperwhite kedu ihe bụ otu mana na ngwaọrụ ọhụrụ Kindle Paperwhite na anyị nwekwara ọrụ ndenye aha n'ụdị Ọdịdị Unlimited nke ahụ ga -eme ka onye kacha nta n'ime ụlọ gụọ akwụkwọ na akwụkwọ n'ụdị dijitalụ.
Yabụ, n'ezie, Amazon na -emelite ụdị Kindle Paperwhite ya mana ọ naghị eji ụdị ndị ọzọ eme ya, na -ahapụ obere oge Kindle Basic na Kindle Oasis.
Mgbapu nke emere ụbọchị abụọ gara aga na webụsaịtị Amazon Canada emezuola mana enwere ihe anyị na -amaghị na taa anyị nwere ike mechaa kwuwapụta. Ịkwụ ụgwọ batrị na ikuku bụ nke kachasị na kwa, ka enweghi nsogbu ịchaji, Amazon etinyela ọdụ ụgbọ mmiri usb-c, na -ahapụ akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri ọdịnala. Nke a na omume nwere ike isi ike kemgbe anyị agaghị enwe ike iji chaja ereader ochie mana anyị ga -azụta nke ọzọ. Agbanyeghị, ngwugwu ereader nwere mkpuchi gụnyere chaja, yabụ mgbe ha rutere Spain, dịka Amazon Spain gụnyere chaja na ngwaọrụ gị.
El Mbinye aka nke Kindle Paperwhite Edition akaụntụ kedu ka ha siri gwa anyị na chaja ikuku tinyere ọdụ ụgbọ mmiri usb-c. N'okwu a, enwerekwa mkpuchi mkpuchi, gbakwunyere ereader tinyere chaja ikuku nke ọnụ ahịa ya bụ $ 239.
Ọzọkwa, Amazon agbanweela atumatu gburugburu ebe obibi ya na mwepụta a, na -eme ka o doo anya na ejiri ihe ndị emegharịrị rụọ ngwaọrụ ahụ, yana nkwakọ ngwaahịa gburugburu ebe obibi yana ohere iji megharịa ma ọ bụ nye agadi ereader ndụ nke abụọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ya maka Kindle Paperwhite ọhụrụ.
Ụmụaka Kindle na -eme nke ọma ka ụmụaka wee nwee mmasị ịgụ ihe
Mana ihe dọọrọ mmasị m nke ukwuu na nke ahụ ga -abụ nnukwu nkwalite maka gburugburu ebe obibi Kindle bụ nlebara anya ụmụaka.
Amazon akpọsala ma kwalite ọrụ ya maka ụmụaka nwere Kindle Kids na -arụ ọrụ dị ka Kindle Unlimited mana yana akwụkwọ na-amasị ụmụaka. Na mgbakwunye, ngwaọrụ nwere ụdị sọftụwia pụrụ iche na -enye nna ma ọ bụ nne ohere igbochi ojiji nke ngwaọrụ, na -egosi oge ngwaọrụ kwụsịrị ịrụ ọrụ ka nwatakịrị wee nwee usoro nhazi, machibido ịgụ akwụkwọ ụfọdụ ma ọ bụ gbanwee ihe mmetụta ọkụ.
Tinyere ụdị ndị a na ụdị ọhụrụ pụtara usoro mkpuchi nwere ebumnuche ụmụaka na ntorobịa nke na-eme ka ndị na-agụ ya nwee ike zụrụ iche kamakwa ọnụ, gụnyere chaja USB-c.
Ugbu a ha adịghị maka ọrịre ikekwe maka na ha abịabeghị maka mba niile. Ọnụahịa nke Ụkpụrụ nkịtị bụ $ 139, ihe nlereanya Mbinye aka nke Kindle Paperwhite bụ $ 159 na ụdị Kindle Kids nwere mkpuchi nke ha bụ $ 159 na $ 109 maka ụdị Paperwhite na Kindle Basic n'otu n'otu.
Amazon na -ahapụ njikọ 4G na mgbasa ozi?
Ụmụaka Kindle bụ nnukwu ihe ọhụrụ, mana ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ marala Amazon kemgbe Kindle mbụ wee gaa na weebụ, ị ga -eti mkpu. Amazon na -ekwusi ike ma na -ekwusi ike ịzụta na ụdị Kindle Paperwhite na -enweghị mgbasa ozi, mgbe ruo ugbu a ọ dịbeghị otú ahụ. Na agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na ndịiche adịghị ọtụtụ na mgbasa ozi anaghị etinye aka, ọ naghị akwụsị ịdọrọ uche.
Ọzọkwa, ụdị Kindle Paperwhite a agaghị enwe ụdị 4G, ya bu, anyị ga -achọ njikọ ikuku mgbe niile iji nwee ike ibudata ebooks, akụkọ ma ọ bụ zụọ ihe. Ọ bụ ezie na ọ bụ njirimara na -abara Amazon uru, ọ bụkwa eziokwu na ọrụ a na -abịa nnukwu ụlọ ọrụ Ma ọ bụrụ na ndị ahịa anaghị eji ya eme ihe nke ukwuu, n'ikpeazụ ọ na -aghọ ịdọrọ na ụlọ ọrụ. Nke a nwere ike bụrụ ihe kpatara n'ọnwa ndị na -adịbeghị anya Amazon na -ahọrọ iji gbanyụọ njirimara a ma ghara itinye ya na ngwaọrụ ọhụrụ.
Anyị amabeghị ụbọchị enwere ike zụta na Spain, n'agbanyeghị na ahịa US ga-adị site na Ọktọba 28 Mana mgbe mwepụ ngwa ngwa ka mwepụsịrị, echere m na ọ gaghị ewe oge ka anyị nwee ngwaọrụ a n'ahịa Spanish, nke n'agbanyeghị ịdị adị nke mbadamba ihe, ka bụkwa ngwa dị mma maka ọgụgụ anyị na oge ntụrụndụ. Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » ụlọ ọrụ » Amazon unu si n'ihe unu » Ọhụrụ Kindle Paperwhite na Kindle Kids, nzọ Amazon maka ọdịda a
Kindle Paperwhite Mbinye aka Mbinye aka, onye na -agụgharị ọhụụ na -agbapụta na ndudue